ट्याग: मैंगोप्स | Martech Zone
Enterprise० इन्टरप्राइज सामाजिक संचार प्लेटफार्महरू
मंगलवार, मार्च 3, 2020 मङ्गलबार, डिसेम्बर 15, 2020 Douglas Karr
अनलाइन परियोजना ब्यवस्थापन प्रणाली सामाजिक सहयोग प्लेटफर्ममा विकसित भएको छ, गतिविधि स्ट्रिमहरू, कार्यहरू, तालिकाबद्धता, कागजात प्रबन्धन र बाह्य प्रणालीहरूमा एकीकरण सहित। यो एक उद्योग हो जुन चाँडै प्रगति हुँदैछ र त्यहाँ उद्योगमा धेरै प्लेयरहरू छन्। हामीले यहाँ उद्यम सामाजिक संचार प्लेटफर्म बजार मा शीर्ष खेलाडीहरू पहिचान गर्न कोसिस गरेका छौं! Azendoo - एक टीम बाट योजना बनाउनुहोस्, संगठित गर्नुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस् र तपाईंको टोलीको काम ट्र्याक गर्नुहोस्। बिज्मीन - तपाईको ब्यावसायिक प्रक्रियाहरू सरलीकृत गर्न लचिलो कार्यप्रवाह प्लेटफर्म। Bloomfire
ओएसएक्स बग: १ Te टेराबाइटमा छवि संकुचन गर्नुहोस्?
बुधबार, अप्रिल 23, 2008 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
यो एक सुन्दर (र हास्यास्पद) बग हो जुन आज म भित्र पसेको छु। म १p०px चौंडादेखि १०० px चौंडासम्म पूर्वावलोकन प्रयोग गरेर छविलाई पुनःआकार दिन चाहान्छु। जब मैले ठीक क्लिक गरेको थिएँ पूर्वावलोकन कहिल्यै बचत हुने छैन। मलाई लाग्छ मैले यो पत्ता लगाएँ - नतीजा आकारलाई हेर्नुहोस्।